Ogawa Kumalada Xiisaha Badan Ee Horyaalka Soomaliya Iyo Kooxaha Ballansan
Friday, July 20th, 2018 - 00:10:34
Tuesday February 28, 2017 - 13:10:00 in Wararka by Kubad Bile
Kooxaha kubbadda cagta Banaadir SC iyo Gadiidka ayaa ciyaar xiiso badan ku leh gegida Jamaacadaha ee degmada Hodan,iyagoo wada ciyaraidoono kulan ciyaareedkii 29-aad ee Horyaalka Soomaliya 2016-2017.
Banaadir SC kulankii ugu dambeeyay waxa ay la ciyaartay 23-02-2017 dhigeeda Bariga Dhexe xili Banaadir SC ay 5-1 ku gaacday B/Dhexe,Banaadir SC waxa ay ku jurtaa booska 1-aad waxa ay lee dahay 13-dhibcood.
Kooxda Gadiidka kulankii ugu dambeeyay waxa ay guul daro kasoo gaartay kooxda Elman ciyaar dhexmartay 24-02-2017,xili uu kulankaas uu ku dhamaaday 3-1,Gadiidka waxa ay ku jurtaa kaalinta 7-aad,iyadoo leh 6-dhibcood.
Geesta kale kooxaha kubbadda cagta Jeenyo iyo Elman ayaa iyagan ku balansan garoonka Banaadir Stadium,iyagoo wada ciyaaridoono kulan ciyaareedkii 30-aad ee xagaagan.
Jeeenyo kulankii ugu dambeeyay waxa ay barbaro la dhaafi waasay kooxda Muqdisho United ciyaar dhexmratay 23-02-2016,xil uu kulankaas ku dhamaaday barbaro 2-2,Jeenyo waxa ay ku jurtaa booska 5-aad,iyadoo leh 7-dhibcood.
Wiilasha Eman iyagana kulankii ugu dambeeyay waxa ay ka badiyeen Gadiidka ciyaar dhexmartay 24-02-2017,xili uu kulankaas ku dhamaaday 3-1,Elman waxa ay fadhisaa booska 2-aad ee kala sareynta Horyaalka iyadoo leh 12-dhibcood.
Is Araga Kooxaha Jeenyo VS Elman
11/06/2012 Jeenyo FC 1:1 Elman FC
02/10/2012 Elman FC 1:2 Jeenyo FC
01/01/2014 Jeenyo FC 0:2 Elman FC
28/02/2014 Elman FC 2:5 Jeenyo FC
02/02/2015 Elman FC 1:1 Jeenyo FC
15/05/2015 Jeenyo FC 0:0 Elman FC
09/02/2016 Elman FC 1:1 Jeenyo FC
02/05/2016 Jeenyo FC 0:0 Elman FC
Is Araga Kooxaha Banaadir SC VS Gadiidka
27/01/2014 Banadir SC 3:2 Gaadiidka
31/03/2014 Gaadiidka 1:2 Banadir S.C
23/12/2014 Banadir SC 1:1Gaadiidka
23/03/2015 Gaadiidka 2:1Banadir S.C
16/02/2016 Gaadiidka 0:2 Banadir S.C
07/05/2016Banadir SC 2:1 Gaadiidka
Kooxaha: Banaadir SC VS Gadiidka-Jamaacadaha Stadium
Kooxaha: Jeenyo VS Elman-Banaadir Stadium
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: - 32°24°